Isiqingatha-sobomi beMedia Media | Martech Zone
NgoLwesithathu, Meyi 15, 2013 NgoLwesithathu, Meyi 15, 2013 Douglas Karr
Xa bendithetha eSan Diego Imithombo yeendaba yeNtlalontle, iiNtlekele kunye neeMpazamo, eyona nto ibaluleke kakhulu kwintetho yonke yayiluloyiko olungeyomfuneko oluqhubeka kwimidiya yoluntu ngalo lonke ixesha inkampani ithe chu.
Isiqingatha-sobomi sokuncipha kwimithombo yeendaba zentlalo sihambelana ngokuthe ngqo nenkampani elandelayo.
Kwaye oko kuyenzeka rhoqo kwimizuzu embalwa ngoku. Yonke ingxolo kule veki yile iposti kwiNkampani yokubhaka ka-Amy eScottsdale, eAz. Ngoku… phambi kokuba uye kufunda ukuba iposi, funda nje lo ngeposi ngaphambi kokuba uqhubeke.
Ndibe nethamsanqa ngokwaneleyo (okanye ngelishwa ngokwaneleyo) ukusebenza kwicala lobuchwephesha be ishishini lokutyela kwiminyaka embalwa edlulileyo. Iimpawu zazingqongqo, ingeniso yabasebenzi yayihlekisa, abathengi babekrwada, kwaye iiyure kunye noxinzelelo koovimba bezinto zokutyela zazingaphaya kokuchazwa. Andisokuze ndivule inkampani yam enxulumene nokutya… nanini na. Ndinabahlobo kolu shishino namhlanje kwaye ngenene lishishini ekufuneka ulithande kuba azikho ezinye izibonelelo ezininzi.
Ke, cinga ukuba ekugqibeleni uqalile iphupha lakho kwaye wakha i-bistro yakho. Khawufane ucinge ngoku ukuba unengxaki yokugcina indawo yakho yokutyela igcwele kwaye ithuba liza kuthi ukuze ufumane ingqalelo kuluntu ngokwenyani kumabonwakude.
Yintoni enokuthi ihambe kakubi?
Kulungile… kuba umboniso wenyani kamabonwakude lishishini elizizigidi ngezigidi kuwo, kuninzi kakhulu. Umsebenzi kaGordon Ramsey ayikokuthatha indawo yokutyela kwaye uyilungise kakuhle kumdlalo wakhe. Ababukeli bayayixabisa into yokuba ukrwada kwaye uyazingca… oko kukuzonwabisa. Kwaye injongo yomboniso kukuqinisekisa ukuba indawo yokutyela iboniswe kokona kukhanya kubi kakhulu ukuze uMnu.Ramsey ahambe abonakale ngathi yintshatsheli.
Kubizwa Izinto zasebusuku ekhitshinibantu. Kwaye ndingaxeli ukuba bathi bayayithanda imposiso ... kukho ividiyo yesiqendu kwiphepha labo lasekhaya.
Ayisiyo ukugxekwa okupheleleyo kukaMnu Ramsey. Ndijonge umboniso kwaye, xa eyipikili, uyayifaka. Kodwa usengumonwabisi / umpheki / usomashishini. Abanini bamele ukuba bayazile into abangena kuyo. Kule meko, umboniso awunaso isiphelo esonwabisayo, uRamsey wemka kwindawo yokutyela, kwaye ilizwe liphendule ngemithombo yeendaba ngokuhlasela abanini uSamy no Amy Bouzaglo ngeFacebook.
(~ # ~) Hlaziya (~ # ~): Umboniso omkhulu wendlela inyani esebenza ngayo kumabonwakude, jonga lo mboniso ubalaseleyo kaCharlie Brooker
Kwaye u-Amy Boozaglo waphendula (ngoku funda i- Buzzfeed). Kwakungekho buhle. Ngapha koko, ayilunganga kwaphela.
Oko kwathiwa, ayisiyomfuneko. Inkampani ka-Amy's Bakery ayisiyontambo yesizwe, sisistimela esinobunzima eScottsdale, eArizona. Abantu abahlasela i-Amy's Bakery Inkampani khange badle apho, bebengazukutya apho, kwaye ngekhe bazi ukuba ikhona kude kube sisiqendu kumabonwakude.
Makhe Kuqale Ukoyikiswa
Isigaba esilandelayo sokuncipha kwemithombo yeendaba kwezentlalo, ewe, sesokuba amajelo eendaba ezentlalontle avule zonke iiblogi zabo kwaye baqalise ukucofa, ukucofa, ukucofa indlela abebezakuyihlangula ngayo le nkampani ekufeni okucocekileyo kwaye indlela abanobubi ngayo abaniniyo ngokuzikhusela. ngokwabo kwimidiya yoluntu ngendlela abenze ngayo. Ngokuqinisekileyo… khange bayenze kakuhle. Kodwa andinakubasola. Khawufane ucinge ukuba ubusezihlangwini zabo, umsebenzi wobomi bakho ubonakalisiwe njengobubi kumabonwakude wesizwe, kwaye ushiyeke nemikhosi yeetrolls eReddit, Yelp nakwiFacebook eyonakalisa inkampani yakho.
Ndingacaphuka nam. Kwaye ndiza kuphendula ngokunjalo.
Ke Sifunde Ntoni
Indawo yokutyela yafumana ingqalelo kuzwelonke, malunga nabalandeli abangama-50k + kuFacebook, kwaye-andikwazi ukukuqinisekisa oku - kodwa ndiqinisekile ukuba igumbi lokutyela ligcwele ngoku. Babo iwebhusayithi ixakeke kakhulu ukuba yaphahlazeka. Kwaye kubo bonke abantu abenza ukubhukisha eScottsdale ukuba badle kule 'ndawo ikwiiKhitshi Nightmares', ndiqinisekile ukuba abanye babo bazokugoduka bathi ... 'Wow, bekukuhle oko'!
Kwaye ke ubomi besiqingatha sobomi be-media media bunyibilika. Kude nokubhomboloza kunye nokukhala kweepundits zemithombo yeendaba zentlalo, uya kufumanisa ukuba isiqendu sasingeyonto ingaphaya komoya. Ngokuqinisekileyo, inuka kakubi imizuzu embalwa, kodwa iya kulunga kungekudala.
Ungakholelwa kwimithombo yeendaba zentlalo, bantu. Yonke inkampani inokuphinda ichache. Kwaye ukuqikelela kwam kukuba iNkampani yokubhaka ka-Amy iya kuphinda ibuye kakuhle.
tags: Inkampani yokubhaka ka-amyishishini lokutyelazokutyela
Meyi 15, 2013 kwi-11: 01 PM
Amanyundululu e-Intanethi aqhele ukwenziwa njengephepha elinombala-ayasasazeka ngokukhawuleza njengoko etsha. Kodwa konke kwindlela oyiphatha ngayo. I-Amy's Baking Company's self-inflic epic FAIL yaqinisekiswa xa bephendula kubagxeki babo ngokuzingca ngamalungisa, indawo yesikolo i-braggadocio, ubundlobongela bokuma, kwaye okona kubi kakhulu kukuhlaselwa kwabantu.
IBouzaglos yayinethuba lokufumana uluvo loluntu kwicala labo, kodwa bayivuthela. Ngebabezifumanele nje kancinci kwaye baphendule kubagxeki babo ngokudibanisa ubabalo, ukuthobeka kunye nehlazo lokuzithoba. Endaweni yoko, indawo yabo engabalulekanga, engabhalwanga kakuhle iqinisekisa iziphumo njengokuxuba ulwelo lwe-hypergolic kwiinjini zerokethi.
Ngokwahlukileyo, jonga indlela umphathi weendaba oselula awuphethe ngayo umlo wakhe kwinyanga ephelileyo kwisikhululo sikamabonwakude saseNyakatho Dakota, kulandela ukubhabhaza kwakhe ngemipu ye-F-njengoko wayehamba emoyeni okokuqala (kwaye okokugqibela) ixesha. Emva koko, akazange azame ukugxeka mntu ngaphandle kwakhe, wayengenabubi ngakwisikhululo ngokumgxotha, kwaye ngokuthobekileyo wavuma ukuba YIMPUMELELO enkulu kwaye wazihleka ngayo.
Ngenxa yoko, uluntu lumbona njengomfana omncinci, othandekayo owenza i-flub ethembekileyo. Baninzi abantu ababecaphuka ngenxa yokudubula kwakhe kunaleyo yanyelisa esemoyeni.
Lo mfo uya kuphinda enze into entle.
Kodwa Ngaba Inkampani ka-Amy yokubhaka? Andiqinisekanga ngaloo nto. Banokuyonwabela into emfutshane kwishishini kubantu abafuna ukwazi. Abanye baba bantu banokuzama ukujija abanini babo kwimpikiswano okanye ukukhutshwa ngaphandle. Kodwa akuthandabuzeki ukuba baya kubona ukuphindaphinda kweshishini ukuba imveliso yabo yokutya iphakathi kwaye ixabise kakhulu, kwaye banikezela ngenkonzo nge-snarl.
Kodwa esona salathisi sikhulu ngokuchasene nempumelelo yabo yexesha elizayo kukuba isimilo esinetyhefu, esingasebenzi kakuhle esibonisa abagxeki kunye nabasebenzi kunokwenzeka ukuba bachithekele ekusebenzisaneni kwabo nabanikezeli ngeempahla, iibhanki, kunye noluntu olujikelezileyo- ngamafutshane, nabani na nabani na onesandla ekugcineni oko Ukuqhuba kweshishini.
Meyi 15, 2013 kwi-11: 18 PM
Inqaku lam ayisiyo kwaphela indlela abaziphethe ngayo. Ndiphikisana kuphela nefuthe eliya kuhlala likho kwishishini labo. Uqikelelo lwam kukuba ishishini liya kumangalisa… okwexeshana. -
Meyi 16, 2013 kwi-10: 12 AM
Ndicinga ukuba niyalungisa, Douglas. Ishishini liza kuthatha okwexeshana, kodwa ukuthandwa nguFacebook kunye nokubethwa kwiwebhusayithi akuthethi lukhulu kwishishini lexesha elide kwimeko enje. Ngaba banokuyijikeleza le nto ibe yinto elungileyo kamva endleleni? Ngokuqinisekileyo. Ukuba oku kubonakala kuyinyani, ngaba ishishini labo langoku liya kuphumelela? Mhlawumbi ngaphandle kokuphinda uzalwe ngokutsha.
Ngoku, babanga ukuba baqhekezwa; Ke ukuba bekunjalo, kwaye ngokwenene yimikhosi enobabalo, oku kunokubahle kubo.
Meyi 19, 2013 kwi-7: 50 PM
Ishishini alichongi konke konke. Zivalekile okwexeshana.
Babefumana uphononongo olubi kwi-Yelp kule minyaka-2 idlulileyo ngokuthuka nokukhaba abathengi ababekhalaza xa befumana ukutya okungalunganga okanye inkonzo ecothayo.
Baqhakamshelana neRamseys ngekratshi ukuze 'axelele umhlaba ukuba kulungile kangakanani ukutya kwabo.' Ndicinga ukuba babecinga ukuba uza kuphelela ebenzela.
Ngaba ubukele isiqendu, ubuncinci imizuzu emihlanu yokuqala? Aba asingabo abanini beendawo zokutyela abahlwempuzekileyo, zizinto nje ezimsulwa nezilula.
Meyi 20, 2013 kwi-5: 54 AM
Into kukuba, isizathu sokuba konke oku kuqhushumbe kwindawo yokuqala kungenxa yokuba ukutya kunye nenkonzo zazisoyikeka. Ayisiwo umlilo osasaza imithombo yeendaba eluntwini, le yinkampani engahambisi imveliso esemgangathweni. Endaweni yokusebenza kwizinto ababize zona eRamsay ukuze abenakho ukugxeka abagxeki emqolo. Zombini zazinekratshi kwaye zisebenzisa ubuqili.
Oku akuzange kuqalwe ngandlela-thile ngama-troll media. Oku kwaqalwa ngabanini. Uqikelelo lwam kukuba ukubikezela kwakho ukubuyisela kwakhona akuyi kusebenza. 🙂
Meyi 20, 2013 kwi-9: 13 AM
Njengoko amanye amagqabantshintshi athe aphawula, ukuba ubusibukele ngokwenyani esi siqendu, uya kuqonda ukuba uAmy noSammy Bouzaglo abangabo abangamaxhoba kule meko. Endaweni yoko, ngabathengi kunye nabasebenzi abaphathwe kakubi. Ngaba ukuhambisa ukutya okuneqhwa okuthengiswe njengokutsha kwindawo yamaxabiso aphezulu? Ishishini elibi. Ukuhlukumeza abathengi kokubini ngamazwi nangokwasemzimbeni ngenxa yokukhalaza okanye ukuthumela ukutya kwakhona? Ishishini elibi. Ukuthatha iingcebiso zomsebenzi ngaphandle kokwazisa abathengi? Ishishini elibi. Kunye neempendulo zabanini kwizikhalazo kunye nokuphononongwa kakubi bathetha ngokwabo. Baye baba iifoto kwezinye iivenkile zokutya bazithumela kuFacebook nakwiwebhusayithi njengokutya kwabo. Oko ngokucacileyo kubiwe kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Uninzi lwamashishini abiwe kwiifoto zabo ukususela oko bathumele kwi-Facebook yabo becela ukuba imifanekiso isuswe. Nokuba inkampani ye-PR ababeyiqeshile yatsho kudliwanondlebe ukuba ishishini belingenako ukuhlangulwa kwaye bangangcono xa bevale ngoku kunye nokusika ilahleko yabo.
Andiboni ndlela yokuba babuye kule nto. Uluntu olubi olwavela kwisiqendu seKN lwalusisiqalo nje somkhenkce. Inani eliphezulu labalandeli bakaFacebook, kwaye emva koko inani lababhukishelwe umcimbi wokuphinda uvulwe ngomso ikakhulu ngabantu abalindele ukuba ukophuka kuloliwe bafumane umjikelo. Kukho isikhalazo se change.org esijikelezayo ukufumana iSebe lezabaSebenzi ukuba liphande inkampani ngokuhlutha iingcebiso zabasebenzi. Ukuqwalaselwa kwabenza ukuba baziwe ngakumbi ngolwaphulo-mthetho oludlulileyo: U-Amy Bouzaglo wagwetywa ngobusela besazisi kwiminyaka eyadlulayo xa wayezama ukuvula umgca wetyala nge-SSN yomntu.
Ukulindela kwam kukuba baya kuhlala bevulekile de banyanzelwe ukuba bafake iifomathi. Banenkani kakhulu ukuvala ngenxa yeendaba ezimbi, kodwa phakathi kwento abayihlawulayo kwinkampani ye-PR kunye nenani lezimangalo ekuthiwa bazifaka kwiitroli ze-intanethi, imali abanayo ayizukuhlala ixesha elide.
Meyi 20, 2013 kwi-9: 21 AM
@ facebook-769091638: disqus ndibukele sonke isiqendu kutshanje… kubonakala ngathi lolo qeqesho (ngokomxholo we "Kitchen Nightmares" womboniso), kodwa uyagxuma kwi-bandwagon kanye njengokuba wonke umntu ethatha "iNyaniso ITV ”njengobungqina obupheleleyo. Inqaku eliphambili kwimpendulo yam kukuba umboniso bubungqina bokuhlelwa okuhle kakhulu. Isimanga kukuba uRamsey wavula umboniso ethetha kakhulu ngezinto zabo ezibhakiweyo (bayivenkile yokubhaka) kunye nococeko ekhitshini.
Andikukhuthazi ukuziphatha kwabo, okanye impendulo yabo. Inqaku lam lelokuba asinayo ifilimu efanelekileyo yokujonga kwakhona ekhokelele kumacandelo ahlelweyo kwaye adityaniswa ngokudibanisa le meko. Ndicinga ukuba lilishwa lokuba abantu abaninzi bavuya kukusweleka kwaba bantu. Kubuhlungu, ukuba akukho buhlungu ngakumbi, kunendlela abaphatha ngayo abanye abantu kwesi siqendu. Njengoko benditshilo eposini, ukuba bendikhuphile ubomi bam obungaphezulu kwesigidi seedola kwaye inkampani yam ibisihla ngebhola yomlilo, andiqinisekanga ukuba ndiza kuphendula kakuhle, nokuba.
Meyi 20, 2013 kwi-11: 27 AM
Eli linqaku lokuqala endilifundileyo elinovelwano, okanye ubuncinci
Injongo, malunga nokubhaka kuka-Amy. Njenge-imgurian (umzala obomvu), umlandeli we-yelper kunye no-fb ka-Amy's Baking, ndingatsho ngokuqinisekileyo ukuba abo bathanda
bonke babeyinxalenye “yentengiselwano” yentlalo. Umzekelo, "ndiyayithanda" i-facebook yakho ngethemba lokufumana ezinye iirantshi zempambano ezonwabisayo, kwaye uza kungena ngaphakathi kwi-feed yam yeendaba. Nje ukuba "bathandwe" banokuthetha nantoni na abayifunayo kwaye ndiza kuzenza zonke iindlebe (amehlo kule meko) de ndikruquke ngabo. Bangayithatha le ngozi yaphuka baze bayenze igolide, kodwa bayayenza? Akunakulindeleka. Ngokuziphatha okungathandekiyo, bafumene ukuthandwa okungaphezulu kwama-50k kwi-facebook kwiintsuku nje ezimbalwa ezimfutshane. Xa ndibathandayo, bakuluhlu lwe-5-10k. Oku kubanike ithuba lokuba babe sisiqhulo somlomo (sobungendawo obuzenzekelayo- khetha nje ithagethi kwaye wenze isijwili) ezinokuthi ngokulula zijike zibe yindawo yokuqinisa intengiso kwi-Intanethi. UBen noJerry benza iayisi khrim ukuhlonipha abantu, okt i-Americone Dream kaStephen Colbert. Banokwenza iidessert zokugculelwa okanye izinto ezintsha zemenyu kwaye bathumele imifanekiso. "UAnn Coulter yiTaco Salad." Izinto ezinje ziya kundigcina ndibukele, kodwa kuya kufuneka usigcine sonwabile kuba silibale ngokukhawuleza. Ndihlala ndilibala ukuba yeyiphi imiboniso endiyibukeleyo ngexesha lentengiso. Ukuqhekeka koololiwe kwi-intanethi ayisiyo mngxuma, ileli. 😉
Meyi 20, 2013 kwi-11: 54 AM
Uhlaziyo: Ukuthandwa: 96,231, kunye nokubala, ezili-10 ezintsha okoko ndaqala ukubhala olu hlaziyo.
Zonke izinto ezoyikisayo zisuswe eludongeni ngaphandle kwale post ngo-Okthobha: “Sithanda ukubabiza ngokuba yi 'Camel Toe Mafia' njengeqela lamaPussies azifihle ngasemva kwescreen sekhompyuter. Okanye ndisebenzela i-YELP ”
Kubonakala ngathi iphupha lam elitsha elisebenzayo le-comedic ye-intanethi liphelile ngokukhawuleza njengoko kwaqala. Ixesha lokungafani nabo kwaye uhambe ukhasa ubuyela kuColonel Meow. I-MEOW!